सेनाको काम गरेका ठेकेदारले सबै पैसा पाए, अमेरीका लान करोडौं ठगी गर्ने ग्रिन कार्ड होल्डर ! (भिडियोसहित) – Anurag Post
Home / अनुराग पोष्ट / सेनाको काम गरेका ठेकेदारले सबै पैसा पाए, अमेरीका लान करोडौं ठगी गर्ने ग्रिन कार्ड होल्डर ! (भिडियोसहित)
Anurag Post June 7, 2018	अनुराग पोष्ट, अन्तर्वार्ता, प्रवासी, भिडियो, राजनीति, व्यापार, स्वास्थ्य Leaveacomment 286 Views
पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्राईको ट्वीटबाट आजको प्रशंग उठान गर्न चाहन्छु । डा.भट्राईको ट्वीट पहिला जस्ताको त्यस्तै सुनाउन चाहन्छु । उहाँ लेख्नु हुन्छ, ‘कछुवाकै गतिमा देश चलिरहने भयो भन्ने दसी, प्रत्यक्ष भोगियो । विदेश जान दुतावासमा भिषा निम्ती कुरा गरियो । दुतावासले परराष्ट्रबाट डिप्लोमेटीक नोट खोज्यो । परराष्ट्रले प्रधानमन्त्री कार्यालय पठायो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसद सचिवालय खेद्दियो । संसद सचिवालयले फेरी परराष्ट्र फर्कायो । एउटा पुर्व प्रधानमन्त्रीको यो दशा, अरुको के ?
मुलुकको हितका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार छः अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौँ : अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मुलुकको हितका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनको तालिका बनाएर सरकार अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले आव २०७५÷०७६ को बजेटले बजेट घाटालाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने कोशिश गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी मुलुकमा चार लाख जनतालाई रोजगारी दिने कुरामा सरकार लागेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले महिला उद्यम विकासका लागि सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।
हामीले यी समाचार news24nepal.tv बाट लिएका हौ
Previous यातायात सिण्डिकेट हटेपछि के-के भयो, के-के भएन ? एक खास समीक्षा ! (भिडियोसहित)
Next Boogie Woogie, Full Episode 13 आज बाट भोटिङ राउन्ड सुरु भएको छ तपाइँ पनि एक पटक हेरेर आफ्नो प्रतिकृया दिन नभुल्नुहोला